हेर्दाहेर्दै कंगाल बनाए यार… एनआरएनएलाई ! एनआरएनए कार्यालयमा समेत ‘डकैती’ ! - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > NRNA > हेर्दाहेर्दै कंगाल बनाए यार… एनआरएनएलाई ! एनआरएनए कार्यालयमा समेत ‘डकैती’ !
February 13, 2020 February 14, 2020 GRISHI348
कसरी पऱ्यो मुद्दा ?
अर्को रोचक लुटतन्त्र हेरौँ एनआरएनए कर्मचारीतन्त्रको । भ्रष्ट्राचारलाई छिपाउन र नियमित रुपले कागजात मिलाएर लुट्न अध्यक्षपिच्छे नयाँ नियुक्ति हुन्छन् कार्यालयमा । एनआरएनएका प्रकाशन ठेक्का, परियोजना ठेक्का, कमिसन मिलान र मानवतस्करीका खेलहरू लुकाउनु अनिवार्य हुन्छ । देखिए त प्रतिष्ठा, पद र परियोजनासमेत चौपट हुन बेर लाग्दैन । त्यसैले आफ्नो भरको कर्मचारी चाहियो । यी र यस्तै कारणले गर्दा हाल १७ जना कर्मचारी छन् केन्द्रिय कार्यालयमा । ती मध्ये तीनजना त पियन (कार्यालय सहयोगी) नै छन् । एनआरएनए केन्द्रिय कार्यालयका प्रमुख अफिसर हेमन्त दवाडी हुन् । एनआरएनए केन्द्रिय कार्यालयका प्रमुख दवाडीले आफ्नै साली संगीता अवालेलाई आफ्नो डेपुटी राखेका छन् । एनआरएनएको हरेक ठेक्कापट्टा, बिल भर्पाइ बनाउने काम यिनै अवालेले गर्छिन् । भिनाजुले सहि गरिदिने र मिलाउने गर्छन् । नेतृत्वसँग डिल गर्दा आँफै अघि सर्नुपऱ्यो । नक्कली बिल भर्पाइ पनि गोप्य र भरपर्दो स्थानबाट बनाउन पऱ्यो । ठुलो संस्थामा नेपाली पाराको भ्रष्टाचार गर्नै पऱ्यो । रंग–रमाइलो पनि गर्ने पऱ्यो । कार्यालयमा रेष्टदेखि बेडसम्म बुझ्ने आफ्नो हितको मान्छे चाहियो । त्यसैले कार्यालयबाट चाखलाग्दा यस्ता काम धेरै हुन्छन् ।
नम्बर एक, भूमाफियासँग तात्कालिक सम्बद्ध नेतृत्वहरूको चलखेल पर्दाफास गर्न संस्थापक र कानुनविद लगायतको एक शक्तिशाली आयोग बनोस् । नम्बर दुई, आरोपितहरूलाई बहालवाला पदबाट तुरुन्त पद मुक्त गरियोस् । नम्बर तीन, आयोगले दोषी ठहर गरेका कमिसनखोरबाट भवन र जमिनको लगानी असुलउपर गरियोस् । नम्बर चार, आवश्यक कर्मचारी बाहेक कार्यालयका अनावश्यक कर्मचारीलाई प्रक्रिया पुऱ्याएर बिदाई गरियोस् । नम्बर पाँच, क्षमतावान छोटो करारका कर्मचारी मात्र नियुक्त गरियोस् । नम्बर ६, विधान र अनुसासनको सर्वोच्चता कायम गरियोस् । नम्बर सात, आर्थिक पारदर्शिता कायम गरियोस् । र, अन्तमा नेपाली मजदुरहरूको चुनावी किनबेच बन्द गरियोस् ।
आदरणीय एनआरएनहरू, यो लेख पढेपछि तपाईंहरू आफ्नो धारणा लेखकै आधारमा नबनाइदिनुहोला ? तर अपचलनको गहिराइ बुझेपछि सोधपूर्ण तरिकाले भने पक्कै सोच्नुहोला, प्रवासमा दलाल अभियन्ताहरूले के कुराको लागि आफूलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् ? उनीहरूले हामीलाई केको निरन्तरता लागि प्रयोग गर्दछन् ? उनीहरूको लागि हामी के हौँ ? कतै किनबेचका साधन मात्र त हैनौँ ? यिनीहरूको करोडौँ चुनावी खर्चको श्रोत के हो ? आम एनआरएनहरू, पाठकहरू, यो लेख पढेपछि तपाईंहरू के ठान्नुहुन्छ ? हालको डरलाग्दो परिघटनाले पक्कै सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । अब सम्पूर्ण एनआरएनहरूको एउटै चाहना र प्रश्न छ, त्यो बेलाका कार्यदल र पदाधिकारीहरूले जवाफदेहिता बहन गर्ने कि नगर्ने ? जवाफदेहिताको लागि शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गर्ने कि नगर्ने ? यति ठुलो भूमाफियासँगको हिमचिम र लेनदेनबाट संघलाई परेको क्षतिको उनीहरूबाट असुलउपर गर्ने कि नगर्ने ? अख्तियारले त शुरु गऱ्यो बिगो असुली ! सांसद निलम्बनमा परे । के एनआरएनएका त्यो बेलाका निर्णायकहरूलाई उनीहरूको बहालवाला पदबाट निलम्बन गर्न सक्ने हैसियतको आयोग बन्न सक्छ ?